Sivavanye ikhadibhodi yenyani ye-AT & T | Iindaba zeGajethi
Sivavanye ikhadibhodi yenyani ye-AT & T
UPablo Ortega | | ngokubanzi, Nyaniso, Reviews, Te knoloji
I-AT & T yinkampani yamva nje yokujoyina inyani yokwenyani kwaye oku kuye kwaphefumlelwa sisisombululo sikaGoogle. Umsebenzi weefowuni wase-US uphuhlisile Iiglasi zenyani ezingabizi kakhulu ezenziwe ngekhadibhodi kwaye sinokuyisebenzisa kunye nee-smartphones zethu eziqhelekileyo. Ixabiso ibhokisi kuphela IRandi ye10 (ixabiso elincinci kuneGoogle Cardboard).
Kwaye kutheni inkampani efana ne-AT & T ithathe isigqibo sokungena kwinyani yokwenyani? Ngephulo "Inokulinda", ejolise ekwaziseni uluntu phakathi abaqhubi ukuze bangajongi iifowuni ngelixa uqhuba ivili. I-AT & T iphuhlise usetyenziso, oluhambelana ngokupheleleyo nenyani yokwenyani, esisibeka ezihlangwini zomqhubi ongenzi nto ngaphandle kokuziphazamisa emva kwevili.
Esi sicelo, sibizwa ngokuba "Sinokulinda", siyafumaneka kwi I Google Play Store njengakwi Ivenkile yeApple yeApple, simahla ngokupheleleyo. Ngexesha le Amava e-3D, enokubakho ngenxa yekhadibhodi yeedola ezili-10, sibona indlela esiza kungqubana ngayo amatyeli aliqela okanye nokuba sibaleke kubahambi ngeenyawo ngenxa yomnxeba. Omnye umqhubi uya kuziva enxulumene nale meko ukuba ukhe wehlelwa luloyiko kwivili.
Idemo isimema ukuba sihambise iintloko zethu ngeendlela ezahlukeneyo, siphonononge okusingqongileyo, kodwa asizukukwazi ukuphatha ukuqhuba nangaliphi na ixesha. Inkqubo ye- amava "amanzisa" kwaye ekugqibeleni siza kubona ukuba isekondi esinye sokuphazamiseka ngenxa yomnxeba sinokuba neziphumo ezibulalayo. Imoto iza kwelinye icala ize ibaleke kuthi.
1 Isebenza njani ikhadibhodi yenyani yenyani ye-AT & T
2 Yonke inyani ebonakalayo kwiikhadibhodi ze-AT & T
Isebenza njani ikhadibhodi yenyani yenyani ye-AT & T
Ibhokisi yekhadibhodi ye-AT & T iza ngokuhlangeneyo kunye nomsebenzisi awuzukulandela imiyalelo enzima ukumilisela le nkqubo elula yokwenyani.
Singayibamba ibhokisi ngesinye sezandla okanye sinokuncamathisela iribhoni. Ngayiphi na imeko iya kuba lula kwaye ikhawuleze lungelelanisa inqanaba lobunzulu emehlweni ethu kunye neemfuno. Qiniseka ukuba uyenza ngokufanelekileyo ukunqanda isiyezi (esinganyanzelekanga ngokwenyani).
Ikhadibhodi isebenza ngayo nayiphi na i-smartphone yangoku, eya kusebenza njengescreen. Sikwazile ukuwavavanya nge-iPhone 6, i-iPhone 5, i-Samsung Galaxy S6, i-Samsung Galaxy S6 Active kwaye siye sazama nokuvavanya ifowuni enkulu, njenge-iPhone 6 Plus, enescreen se 5,5 intshi kwaye ingena kwimeko ngaphandle kweengxaki. Ewe kunjalo, sicebisa ukuba ujonge kakuhle ukuba i-flap yebhokisi ilungisiwe kwaye ibinzima, ukuthintela ifowuni ekutyibilikeni kwelinye lamacala.
Enye into enomdla ngayo Ikhadibhodi ye-AT & T kukuba siyakwazi ukudibanisa ii-headphone, ukuba siyazidinga.
Yonke inyani ebonakalayo kwiikhadibhodi ze-AT & T
Ikhadibhodi ye-AT & T ayenzelwanga nje kuphela ukuze siphile kula mava, kodwa kunjalo iyahambelana nazo zonke iintlobo zezicelo zokwenyani.
Enye yezona zaziwa kakhulu yi «inyani yenyani ye-roller coaster«, Esinokuzifumana kwiivenkile zesicelo se iapile kunye Uphando simahla. «I-Roller Coaster VR»Isisa ngokupheleleyo ekutsaleni ekubonakala ngathi iyacotha ekuqaleni, kodwa loo nto iya kubeka ibhalansi yethu kuvavanyo kwizahlulo, xa imoto yethu iqala ukukhawulezisa. Kungenxa yoko le nto sicebisa ukuba amava okwenyani enziwe xa umsebenzisi ehleli. Le adventure ikwasimema ukuba sihambise iintloko zethu kwelinye icala siye kwelinye kwaye ndikholelwe xa ndikuxelela ukuba isisu sakho siza kukunika ngaphezulu kokutsiba.
Esinye isicelo esinomdla esikwazileyo ukusifumana-simahla-sisisa kwi umhlaba wejurassic kunye needinosaurs ezimbalwa. Kwi "Jurassic Virtual Reality" siya kuba namandla angaphezulu okunxibelelana, kuba indawo yentloko yethu iya kunceda umlinganiswa ukuba aziqhelanise. Ke ngoko, siya kuba nakho ukuhamba, okwenza amava abe mnandi ngakumbi, ngakumbi xa siqala ukudibana needinosaurs. Kwaye sinokuzola, kuba kubonakala ngathi ezi zidalwa zondlekile kakuhle kuba azisayi kusihlasela nanini na. Iyafumaneka kwifayile ye- iPhone kunye nezixhobo Android.
Ukuba ufuna ukuqala ukuzama ubunyani bokwenyani kwaye ungachithi imali eninzi uzama, wena Sikhuthaza ukuba uzame ikhadibhodi ye-AT & T, onokuyithenga nge- "Ingalinda" iwebhusayithi yephulo. Unokusebenzisa usetyenziso lwenyani lwe-AT & T kunye neKhadibhodi kaGoogle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » Nyaniso » Sivavanye ikhadibhodi yenyani ye-AT & T
Umda we-Samsung Galalaxy S6 + ngoku usemthethweni
Ii-smartphones ze-5 ezinesikrini esine-intshi ezi-6 eziza kukwenza uthandane